अर्थ मन्त्री खतिवडाको दिनगन्ती सुरु, नेकपा सचिवालय बैठक ३ बजे बस्दै – Kadar News : Oneline Digital News:
अर्थ मन्त्री खतिवडाको दिनगन्ती सुरु, नेकपा सचिवालय बैठक ३ बजे बस्दै
प्रकासित : १८ भाद्र २०७७, बिहीबार १२:०५
१८ भाद्र, काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको ६ महिने कार्यकाल सकिन अब ६० घन्टा बाँकी छ । त्यसको अर्थ हो खतिवडा भाद्र २० गते आइतबार राति १२ बजेसम्म मात्रै अर्थमन्त्री रहन पाउनेछन् ।
डा. खतिवडा ०७६ साल फागुन २१ गते अर्थमन्त्रीमा पुनः नियुक्त भएका थिए । उनले २१ गते नै सपथ–ग्रहण गरेका थिए । सपथ ग्रहण गरेको दिनदेखि गणना गर्दा भदौ २१ गते राति १२ बजे उनको ६ महिने पदावधि समाप्त हुन्छ । संविधानअनुसार संसदको सदस्य नरहेको व्यक्ति ६ महिनाभन्दा बढी मन्त्री बन्न मिल्दैन ।
संविधानतः मन्त्री पदमा बस्न नमिल्ने भएकाले अर्थमन्त्री खतिवडाले अबको दुई दिनभित्र राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ ।
भदौ १३ गते प्रधानमन्त्री ओलीले डोल्पाबाट प्रतिनिधिसभाको उपचुनाव लडाउने प्रस्ताव गौतमसँग राखेका थिए । तर, गौतमले राष्ट्रियसभामै लैजानुपर्ने अडान राखे ।
जबकि नेकपा सचिवालयले यसअघि नै वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने निर्णय गरिसकेको छ । ९ सदस्यीय सचिवालयमा वामदेवको पक्षमा बहुमत छ ।
नेकपाका एक नेता भन्छन्,’ त्यसैले गौतमजी राष्ट्रियसभाको सांसद त बन्नु होला, तर मन्त्री बन्न सक्नुहुन्न ।’
खतिवडा आफै राष्ट्रिय सभा जान अनिच्छुक ?
प्रधानमन्त्री ओलीले आफू निकटस्थहरुलाई बताएअनुसार स्वयं अर्थमन्त्री खतिवडा पदमा निरन्तरत रहन अनिच्छुक देखिएका छन् । पार्टी नेताहरुवीच विवादमा पर्ने गरी आफू अगाडि आउन नचाहेको जवाफ अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको स्रोतको भनाई छ ।